Accueil > Gazetin'ny nosy > Hain-tany : Tanàn-dehibe maro no mijaly rano
Hain-tany : Tanàn-dehibe maro no mijaly rano
Nanomboka ny volana aogositra 2021 dia marobe ny tanàna tsy misy rano intsony fa voatery mampiasa fiara lehibe misy “citerne” ireny. Fianarantsoa no isan’ny voa mafy amin’izany satria ritra tanteraka rano ao Analambiby izay mamatsy rano an’ity tanàna ity. Ritra hatramin’ny reniranon’i Matsiatra. Azo andehanana tongotra sy itsangatsanganana izany amin’izao. Toa izany koa ny reniranon’i Managnatana any Ambalavao. Tsy misy rano intsony ny lakandrano madinika avy amin’ny loharono manodidina maro.
Ny ao Ambositra sy Fandriana ary Ambatofinandrahana dia tsy misy intsony ny rano fisotro madio. Matsaka any an-doharano ny ankamaroan’ny mponina. Tao anatin’ny iray volana izay dia ritra ny loharano maro. Hatramin’ireo nandavaka vovondrano dia ritra avokoa.
Eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina dia tsy tenenina intsony ny tsy fahampian-drano. Ny eny anivon’ny fokontany dia tsy tenenina intsony ny tsy fahampian’ny rano fisotro madio. Hoa’ny faritan’Antananarivo manokana dia ritra ny renirano maro ka isan’izany i Ionive izay mamakivaky an’i Vakinankaratra, toa izany koa i Manandona ary Ikopa sy Imamba ary Sisaony. Mananotanona ny kere sy ny hain-tany.
Ny any Morondava sy Mahabo dia ritra ny reniranon’i Dabara, toa izany koa i Sakena ary Manambolo. Efa sarotra dia sarotra ny fahitana rano ankehitriny. Mitombo isan-taona ny olana mahakasika ny rano ity eto Madagasikara.
Tao anatin’ny dimy taona izay dia miharitra ny renirano maro eto Madagasikara. Tsy ampy ny intsony ny rotsakorana izay mamelona ireny renirano ireny. Potika ny ala ary tsy voaaro intsony ny tontolo iainana.
Ho avy aty ampovoan-tany ny hain-tany sy ny kere aoriana kely.